Asgard Warriors oghere nyochaa (RTP: 94.56%) - cheapinternetsecuritysoftware.com
Gosipụta ịhụnanya gị maka akụkọ ifo Norse na egwuregwu a site na ịgagharị na ụwa nke chi na Asgard. N’adịghị ka egwuregwu ndị ọzọ sitere na akụkọ ifo Norse, 1 × 2 Gaming gbakwunyere ntụgharị na Asgard Warriors. Kama ịrapagidesi ike na egwuregwu ndị a na-emebu yana akụkọ ifo Norse, ndị na-eweta egwuregwu ahụ gbakwunyere Vikings na egwuregwu ahụ.
Ngwakọta a mere ka egwuregwu ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ iji tinye ndị egwuregwu n’akụkụ oche ha. Na nhazi nhazi 5 × 3, egwuregwu a na-agbanwe nke ukwuu na-enye ụzọ 243 iji merie. Agbanyeghị, RTP ya etinyere ala na 94.56% yana ụgwọ kachasị ya ruru 40x naanị.
Reels: 5Rows: 3RTP: 94.56% Min nzọ: £ 0.1Max nzọ: £ 50Paylines: 243Max win: 40xVolatility: High Hapụ ụbọchị: Mee 19, 2021
Nhazi oghere Asgard Warriors
Ebe ọ bụ na nke a bụ Asgard Warriors Slot, the game is set in Asgard nke ị eleghị anya nụrụ banyere Norse akụkọ ifo. Ọ bụ ebe chi dị ndụ ka enwere ike ịtụle Asgard dị ka ụdị eluigwe maka ndị North Germanic. Humanwa mmadụ akpọrọ Midgard dị iche na Asgard mana osisi Yggdrasil na-ejikọ ụwa abụọ.
Na akụkọ, ọ dịghị Vikings dị adị nke mere 1 × 2 Gaming mere njikọ n’etiti abụọ na egwuregwu a. A na-etinye mpaghara egwuregwu Asgard Warriors na grid na-acha aja aja na-eji osisi. Ndabere ahụ na-egosi ọdịdị ala dị egwu nke dị ka akụkụ nke Asgard. Ọ na-egosi ugwu, osimiri, na ọdọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ n’azụ ahịhịa.
Ebe ọ bụ na Vikings bụ ndị ama ama maka ịwakpo, ha wetara ọnọdụ gbara ọchịchịrị na Asgard Warriors nke a na-ahụ anya n’oge Bonus Spins. N’oge a, a na-echegharị igwe ojii na ọnọdụ dị omimi. N’ezie, a na-ejupụta igwe ndị Asgard Warriors, ọta ha, Mjolnir na Royals.
Atụmatụ Asgard Warriors
Asgard Warriors Slot nwere egwuregwu dị mfe ị nwere ike ịgba akaebe na mpaghara egwuregwu ya na 5 reels na ahịrị 3. Egwuregwu ya gụnyere atụmatụ ole na ole naanị dị ka akara anụ ọhịa, akara akara, Bonus Spins na ndị ọzọ. Knowmara ihe egwuregwu a bụ ihe gbasara ogo egwuregwu nwere ike inye, ka anyị lee atụmatụ ya.
Asgard Warriors bụ otu n’ime egwuregwu ndị ahụ anaghị ele anya na mbụ. Yabụ, ọ bụ ọrụ akara anụ ọhịa iji mee ka egwuregwu ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma baa uru n’oge gị. Asgard Warriors ‘Wild symbol na-anọchi anya Viking Ship nke nwere “Wild” logo n’okpuru ụgbọ mmiri ahụ. Ihe nnọchianya a pụrụ iche na-arụ ọrụ dị ka onye nnọchi maka akara niile na-abụghị nke pụrụ iche iji nyere aka nwekwuo ohere ịmepụta ụyọkọ ụyọkọ.
Ọ bụrụ na e nwere akara anụ ọhịa, n’ezie, enwere akara Scatter nke okpokoro isi na-anọchi anya ya. O nwere akara ọla edo n’egedege ihu ya na akara ngosi “gbasasịa” ka ị wee nwee ike ịhụ ya n’enweghị nsogbu. Mepụta ngwakọta mmeri na akara akara ga-enye gị 16 Spins Spins. Can pụrụ ọbụna rụọ ọrụ a atụmatụ nke anyị ga-elele n’okpuru.
Ebe ọ bụ na anyị nwere akara Scatter, ị nwere ike ịtụ anya ụfọdụ Spins Spins. Iji tinye a bonus gburugburu, mkpa ka ị dakọtara 3, 4, ma ọ bụ 5 Gbasaanụ akara na-esi anwụde. Ihe nnọchianya ndị a gbasara ga-enye gị 8, 12, ma ọ bụ 16 Spins Spins.
Ozugbo i jiri Spins Bonus gị, ị ka nwere ike ịnweta Spins Bonus ọzọ na-aga dị ka ndị a:
Ihe ngosi 1 gbasaa = 1 Spins Spins 2 Ihe ngosi akara = 2 Bonus Spins3 Ihe ngosi akara = 3 Bonus Spins4 Ihe ngosi akara = 4 Bonus Spins5 akara ngosi = 5 Bonus Spins
E wezụga ịnweta Bonus Spins na gburugburu a, ị nwekwara ike iji ohere ọzọ nke Asgard Warriors mee ihe n’okpuru.
Otu n’ime ụzọ kachasị ọsọ iji bulie akara gị ma nweta nnukwu ụgwọ ọrụ n’oge Bonus Spins bụ site na Multipliers. Ego a na-akwụ ụgwọ na-abịa na Win Multiplier agbakwunyere nke na-amalite na 1x. Oge ọ bụla ị rutere akara akara Ikiri ọhụụ, Win Multiplier na-abawanye. Dabere na ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ nke Ikposa akara ị nwetara, gị mmasị Multiplier ga-mbio 1x ka 5x nzọ gị.
Asgard Warriors RTP, ịkụ nzọ na onyinye
Asgard Warriors´ grid na-ese n’elu mmiri na-enweghị atụ iji nye 243 ụzọ iji merie. Nke a bụ otu n’ime egwuregwu nke 1 × 2 withgba Cha Cha nwere nnukwu volatility yabụ atụla anya na ọ ga-enye gị mmeri na-emeri mgbe niile. Ndị agha Asgard na-enye ntụgharị ọ bụla nke na-efu opekempe nke £ 0.10 ruo na nke kacha £ 50.
Mgbe ọ na-abịa ya paytable, ọ bụ nnọọ ihe na-akụda ịhụ ndị dị otú ahụ a ala laghachi Player fim. E jiri ya tụnyere ọtụtụ egwuregwu oghere anyị tụlere; egwuregwu a nwere a 94,56% RTP naanị. Nke a dị n’okpuru nkezi RTP nke ọtụtụ oghere n’oge a. Ihe nnọchianya ya na-akwụ ụgwọ dị ala gụnyere akara akara J ka A nke Asgard Warriors pịrị site na ihe dị ka okwute. Dabere na mmasị gị, ọ nwere ike ịdị ka akara ndị esororo site na nchara nchara.
Ka o sina dị, ọ ka mma ilekwasị anya na akara nke na-enye ụgwọ dị elu. Ihe ngosi akara ugwo ya bu ota, okpu agha, na okpu Thor. Maka akara ngosi ya, Asgard Warriors nwere onye agha nwanyị, nwoke nwoke nwoke na-eto eto nwere ntutu ọcha na ajị agba, yana nwoke nwoke na-enweghị obi. Abịa 5-agwa akara ga-akwụghachi gị ụgwọ 5x ka 10x gị osisi.
N’ihi na a ibu payout, mkpa ka ị adaa 3 to 5 iferi-chested-nwoke warrior akara. Nwoke a nke nwere akwara ga-enye gị ụgwọ ọrụ kwesịrị 20x ka 100x gị.
Gịnị bụ ihe RTP na Asgard Warriors oghere?
Oghere Asgard Warriors nwere 94.56% RTP, nke dị ala karịa nkezi RTP.
Onye weputara Asgard Warriors?
1X2 Gaming bụ ụlọ ọrụ n’azụ Asgard Warriors.
Gịnị bụ volatility na Asgard Warriors?
Asgard Warriors bụ oghere dị elu.
Maka oghere dị egwu, Asgard Warriors nwere mmalite dị mfe na egwuregwu. Agbanyeghị, amara ya nwayọ nwayọ na-abawanye ka ị na-anọ ogologo oge na egwuregwu ma na-ewerekwu spins. Na mbu, Asgard Warriors abụghị otu n’ime egwuregwu ndị ahụ ga-adọta gị site n’ile ya anya. N’agbanyeghị nke ahụ, 1 × 2 Gaming mere ezigbo ọrụ na eserese ya nke nwere ụdị egwuregwu ahụ.
Y’oburu n’ichota otu egwuru-egwu ya nke bu Gold Barbar, I gha hu ihe dika ya na udi ihe osise. Egwuregwu 1 × 2 mere Asgard Warriors iji wepu ndị egwuregwu wee jiri nwayọ merie ha. Yabụ, imewe egwuregwu a abụghị ihe mgbagwoju anya.
Otú ọ dị, egwuregwu ahụ adịghị enye ọtụtụ ụzọ iji merie na ihe ndị ọzọ na-adọrọ anya dị ka egwuregwu 1 × 2 egwuregwu ndị ọzọ. Ndị agha Asgard nwere ike ịbụ ọfụma ma ọ bụrụ na ọ nwere RTP dị elu na ịkwụ ụgwọ kachasị.
Tags:Asgard nyochaa oghere RTP Warriors
Ins na mputa nke Litecoin Casinos
Industrylọ ọrụ ịgba chaa chaa na-adị ngwa ngwa ịnabata ọhụụ …
Olee otú Ggba chaa chaa n’ Onlinentanet si gbanwee kemgbe ọtụtụ afọ?
Kemgbe ụwa, ịgba chaa chaa aghọwo nke fọrọ nke nta …